I-Tumblr Software Spy - Qaphela ama-Tumblr Social App Amavidiyo nama ifotho
I-Tumblr Spy App - Imfihlo Yokuqapha Imibhalo namavidiyo ku-Tumblr Social App
I-Tumblr ikuvumela ukuthi uthumele izinto ozithandayo futhi ujoyine imiphakathi ethande izinto ezifanayo. Ungathumela izithombe, amavidiyo, izingoma, umbhalo noma cishe noma yini oyifunayo, futhi uhlelo lokusebenza lwe-Tumblr inhloli lokulawula konke lokho.
Landelela Imilayezo Eqondile Nezokuthunyelwe nge-TOS Tumblr Spy App
Isofthiwe yokuqapha i-TheOneSpy Tumblr yenza umsebenzisi aqaphele imiyalezo, izithombe namavidiyo abiwe ku-Tumblr. Cishe zonke izinyathelo ezithathwe yi-target Umsebenzisi we-Tumblr angalandelwa ngale software. Noma kunjalo, ukusebenzisa ngokunenzuzo I-Tumblr Spy isici, udinga ukuthola idivayisi ehlongozwayo igxiliwe noma i-jailbroken.
I-TheOneSpy ku-Tumblr App Ivumela Umsebenzisi ukuthi:
Funda imilayezo eqondile ku-Tumblr
Buka izithombe, amavidiyo, futhi Ama-GIF abelwe ku-Tumblr
Landela ama-URL athunyelwe odongeni
Landelela abalandeli kanye nokulandelwa kwe-target
Gcina amehlo nokuthanda
Gcina izinto ze-Tumblr kwi-akhawunti ye-intanethi
Ukulandelela I-Tumblr Ingxoxo Nezokuthunyelwe Ku-Android OS Nge-One Spy Dashibhodi?
Thola i-TheOneSpy uhlelo lokusebenza ukuhlola i-tumblr efakwe kudivayisi eqondisiwe, bese ungena kwideshibhodi ye-TOS negama lomsebenzisi nephasiwedi enikezwe ngesikhathi sokubhalisa. Manje usukwazi ukuqapha konke okuqukethwe kwe-Tumblr media kudivayisi eqondisiwe kusuka ku-akhawunti yakho ye-TOS inthanethi.
KuThabhu elisha ngakwesokudla, ungabheka yonke imilayezo eqondile bese uxoxisana nengxoxo kwenzeke ku-akhawunti ekhonjiwe ye-Tumblr.
Yiziphi izici i-TheOneSpy enikeza nge-Tumblr Spy Software?
Kungani Ufuna Ukuhlola I-Tumblr App?
Amaphesenti cishe angu-61 wezingane phakathi kweminyaka engu-12 kuya ku-17 umbiko I-Tumblr njengenethiwekhi yokuxhumana nabantu abayizintandokazi. Ngeshwa, le nethiwekhi ithola okuqukethwe okuhloswe ngabantu abadala futhi akukho mqondo wobumfihlo. Noma ngabe yini okuthunyelwe isalokhu isesidlangalaleni futhi ingabonwa yinoma ubani kufaka phakathi umuntu ovimbekile. I-TOS Uhlelo lokusebenza lwe-Tumblr Spy kungasiza ukuqapha noma yini izingane zakho ezizithumela kule platform bese zibuya kule sayithi ngenhloso yokuqinisekisa ukuphepha kwazo.
2 ngokusekelwe ku 5 amavoti
I-Tumblr Spy App